घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Jule kounde बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो जुल्स Kounde जीवनी तपाईं आफ्नो बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, आमा बुबा, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थ को बारे मा तथ्य बताउँछ।
संक्षेपमा, हामी तपाईंलाई फ्रान्सेली पेशेवर फुटबलर को इतिहास चित्रण गर्छौं जो एक रक्षक हो। हाम्रो कथा उसको शुरुका दिनहरूदेखि शुरू हुन्छ, जब उनी खेलमा प्रख्यात भए। जुल्स कोन्डेको बायोको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको आत्मकथा भूख मिल्नको लागि, उनको जीवनको सारांश हेर्नुहोस्।
जूलस कौंडेको जीवनी। हेर, उहाँको प्रारम्भिक जीवन र ठूलो उदय।
हो, हामी सबैलाई थाहा छ नयाँ गहना सेविला द्वारा पत्ता लगाइयो एक निर्विवाद होल्डर हो। उनको नामसँग धेरै प्रशंशा पाएको बाबजुद पनि हामी जान्दछौं कि फुटबल उत्साही व्यक्तिहरूले मात्र जुल्स कोन्डेको जीवन कहानी पढेका छन्। हामीले यो फुटबलको प्रेमको लागि तयार गरेका छौं। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जुल्स कुन्डे बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उनी ब्राजिलियन किंवदन्तीसँग मिल्दोजुल्दो शैलीको कारण उपनाम 'काफू' बोक्छ। जुल्स ओलिभियर कान्डेको जन्म फ्रान्सको पेरिस सहरमा नोभेम्बर १ 12 1998 of को १२ औं दिनमा फ्रान्सेली आमा र बेनिसका बुबामा भएको थियो।
उसको जन्म भएको १२ महिना भन्दा पनि कम उमेरमा जूलस काउन्डेको परिवारको पेरिसमा बस्ने व्यक्तिको हृदय परिवर्तन भयो। उनकी आमा (विशेष गरी) एक वर्षको जुल्सको साथ फ्रान्सको राजधानी बोर्डेक्सबाट one० मिनेट टाढा एउटा सानो गाउँमा गइन्।
सानो कुन्डे दक्षिणपश्चिमी फ्रान्सको नौवेले-अक्वीटाइनमा गिरोनदे विभागको कम्युन, लान्डीरासमा हुर्किए। उसले आफ्नो बाल्यावस्थाको क्षण कुनै भाइ वा बहिनीसँग बिताए। आफ्नो एकल आमा सँगसँगै र एक पिताको वरपर बिना।
सानो छँदा, छिमेकीहरू उसलाई आरक्षित हुन जान्दछन्। अझ, एक लजालु केटा जसले आफ्नो समय जहिले पनि मान्छे नजीक प्राप्त गर्न कोशिस गर्न भरोसा गर्दछ। भाग्यको रूपमा यो हुने थियो, फुटबल एक भाग्यो - आफ्नो अन्तर्मुखी प्रकृतिबाट टाढा। सुन्दर खेलको लागि धन्यबाद, हाम्रो केटाले नयाँ बाल्यावस्थाको साथी बनायो जससँग ऊ हाँसे, चिडायो र रमाईलो गर्यो।
जुल्स कुन्डे परिवार पृष्ठभूमि:
लान्डीरासमा एक्लो हुर्किएपछि, उहाँकी आमासँग मात्र, एकल आमा बुबाले उनलाई हुर्काएको तथ्यलाई संकेत गर्दछ। जुल्सले एक मध्यम-वर्गको पालनपोषणको आनन्द उठाए र उनले आफ्नो बाल्यकालमा कहिल्यै अभाव सामना गरेनन्। सत्य यो हो कि डिफेन्डर ठेठ सफलतापूर्वक फुटबलर होइन रग् टु रिच स्टोरीको साथ।
किशोरावस्थामा पुग्नु भन्दा पहिले जूलस काउन्डेकी आमाले आफूले गरेका छनौटहरूलाई सँधै सहयोग गर्थिन्। उसको हेरचाह गर्न सजिलो थियो किनकि ऊ एक्ली बच्चा हो। Lifebogger को अनुसन्धानले ल्याएको परिणामले कुन्डेका बुबाले उनको विकासमा कहिल्यै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छैन। त्यो हातको साथ, हामी निष्कर्षमा भन्न सक्छौं कि उसका आमा-बुबाको सम्बन्धविच्छेद वा छुटेको हुन सक्छ।
जुल्स कुन्डे परिवार उत्पत्ति:
उसको बच्चाको अनुहार हेराईले हेरेपछि तपाई बताउन सक्नुहुन्छ कि फ्रान्सेली फुटबलर बहुजातीय जातीय पृष्ठभूमिमा छ। जुल्स मिश्रित वंशबाट आएका हुन् र विकिपेडियाका अनुसार उनी बेनिनी मूलका हुन्। यसको अर्थ के हो?… यसले संकेत गर्छ, कि कुन्डेका बुबा पश्चिम अफ्रिकाका हुन्, ठीक बेनिनको गणतन्त्र।
यो नक्शाले जूलस कौंडेको उत्पत्ति वर्णन गर्दछ।
जुल्स कुन्डे शिक्षा:
फ्रान्सेली मिडिया आउटलेटका अनुसार ओन्जमोन्डियल, उनको आमाले उसलाई कहिल्यै फुटबलको लागि स्कूल जाने सम्झौता गर्न अनुमति दिनुभएन। एक उत्कृष्ट विद्यार्थी भए पनि, जुल्सहरू यति शान्त र रिजर्भ थिए। यस्तो मनोवृत्तिले उनलाई एक पछि हटेको विद्यार्थी बनायो। ओन्जमोन्डियालसँगको एक अन्तर्वार्ताको बेला, केन्द्रीय डिफेन्डरले निम्न भन्छ;
स्कूलमा, म एक राम्रो विद्यार्थी थिए जो मलाई मन पराउँदैनन् भन्ने कुरामा प्रश्न गर्न मन पराउँदैनथे। मसँग धेरै राम्रो श्रेणीहरू थिए तर एक सीमा व्यवहारका साथ SOMETIMES।
त्यहाँ धेरै समयहरू थिए मैले केही शिक्षकहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्‍यो। तर मैले मेरो परीक्षा पास गरेझैं मलाई सँधै पेन्सीज गरिएको छैन। म केवल मेरो आमाको लागि स्कूलमा भाग लिन्छु जो मलाई छोड्न चाहँदैनन्। मैले मेरो शिक्षा जित्दै गएँ जस्तो मैले मेरो ब्याकलेस पाए।
जुल्स कुन्डे फुटबल कहानी:
बच्चाको पहिलो अनुहार हेर्नुहोस्, उसको सुरुको क्यारियरको दिनमा।
स्टारडमको यात्रा पाँच वर्षको उमेरबाट सुरु भयो। यो त्यसबेलाको थियो जब उक्त युवाले आफ्नो गाउँमा फुटबल खुवाउन थाले। उसले एमेच्योर फुटबल शुरू एघार वर्षको उमेर सम्म फ्रेटरनेल डे लान्डिरासको साथ गर्यो। जब उनीहरूको लागि चित्रण गर्दै, जुल्सलाई उसको स्थिति पत्ता लगाउन कठिनाई भयो। सबैभन्दा पहिले, उसले अन्ततः गोलकीपरको रूपमा व्यवस्थित नभएसम्म सबै क्षेत्रमा प्रयास गरे।
जूलस कौंडेले गोलकीपरको रूपमा फुटबल सुरु गरे।
प्रारम्भिक जीवन फुटबलमा - उनको आमासँग लड्दै:
उदाउँदो ताराका अनुसार यो भय a्कर स्मृति हो। पछिल्ला दिनहरूमा, जुल्स काउन्डेले तल्लो स्तरको फुटबल चर्यो जसमा अक्सर उनीहरू खेलमा पराजित हुन्छन्। ऊ बच्चा हो जसले हराएकोमा रमाउँदैन थियो, किनकि यसले उसलाई पागल बनाउँदछ। दुःखको कुरा, जुलसले पीडित हारको क्रोधबाट बाहिर निस्केकी आफ्नो निराश आमामा खप्नु परेको थियो।
आईटी एउटा पीरियड थियो जब म 9, मेरा आमासँग सताईलाग्दो थिएँ। जब म हराइरहेको थिएँ, उनले मलाई सूचना दिउँथिन् मेरो अनुहार मेरो सम्पूर्ण हप्तामा। यो कुराकानी गर्न असमर्थ थियो मलाई कुरा गर्नका लागि म एउटा बच्चा भएको थिएँ।
म मेरो आमाको ल्याग्सलाइ लात हान्दै छु जब मैले हारबाट घर पाएँ। मैले पासमा पारे र केही जागें स्टुफ पाए। यो SAD पेरियोड एकदम थोरै भयो।
अवस्था झन् झन् विकराल हुँदै जाँदा जुल्स काउन्डेले स्वीकारे (ओन्जेमोन्डियल मिडिया मार्फत) उनकी आमाले कारबाही गरे। उनी एक मनोचिकित्सकलाई भेट्न हतारिइन् जसलाई उनले छोराको रिसको मुद्दा सम्बोधन गर्न सहयोगको लागि बिन्ती गरे। दुर्भाग्यवस, समाधान यत्तिको छिटो कहिल्यै आएन र युवा कौन्डेलाई उनको टोली परिवर्तन गर्न सल्लाह दिइयो। हास्यास्पद कुरा, मनोचिकित्सकले पनि आफ्नो आमालाई यसमा सल्लाह दिए;
तपाईंको छोरालाई पनि त्यस्तै गर्नुहोस्। जहिले पनि उसले तपाईंलाई लात हान्छ, उसलाई लात हान्नुहोस्, जस्तो लाग्छ ... ऊ तल आउनेछ।
जुल्स कुन्डे बायोग्राफी - फेम कथाको लागि रोड:
अन्त्यमा, आमा र छोराको बिचमा सामान्य कुरा भयो। जब जुल्सले अध्ययन र फुटबलको बिचमा मल्टिटास्क्ड गरे, उनले क्लबहरू परिवर्तन गरे, तर आफ्नो परिवारको घरमै रहे। २०० In मा, महत्वाकांक्षी केटा कोर्नमा बसाई सरे जहाँ उनी १२ महिनासम्म बसे। आफ्ना टीमका साथीहरू भन्दा माथि उक्लेर, उहाँ ठूलो क्लब-ला ब्रुडेको लागि प्रस्थान गर्नुभयो, जुन एक राम्रो प्रभागमा देखाइएको थियो।
यस फोटोमा कौंडे गोलकिपर थिएनन्। उसले भर्खरै मात्र आफ्नो स्थिति पत्ता लगायो।
खेलसँगै जीविका कमाउने उनको चाहना बुझेर जुल्सले एउटा निजी हाईस्कूलमा पढ्न छोडे। ठीक त्यस पछि, उसले कडा थिचे र बोर्डोको यू १13 ट्रायलको लागि मौका पाए, जुन उनले उडान रंगका साथ पार गरे।
उनको सुरक्षित व्यक्तित्वको साथ व्यवहार गर्ने:
उसको अन्तर्मुखी चरित्रको कारण, जुल्सले बोर्डोमा जीवनको कठिन सुरुवात देखायो। बिस्तारै, उहाँ सुधार गर्नुभयो, तर ढिलो गतिबाट। केहि पोइन्ट को रूप मा, उनको कोच उसलाई खोल्न को लागी, अधिक कुरा गर्न र कुराकानी गर्न सिक्न। उनले कौंडेलाई मैच, मित्रैलो हुन र दुबै पिचमा बाध्य गराए। फुटबलरले एक पटक भने;
म भनिरहेको थिएँ कि जब पिचमा कुराकानी गरिरहेको छैन, मेरो टोली बनाउन गाह्रो छ मलाई लाग्छ कि उनीहरूको अंश म हुँ, र मलाई राम्रो लाग्दैन भने म कुरा गर्दिन।
मलाई मद्दत गर्ने एउटा तरिकाको रूपमा, सबै जना सहमत भएँ मैले क्यापटेनको आर्मबन्ड पाउनु पर्छ। त्यो साँच्चिकै मलाई मद्दत गर्दछ।
कुनै समय छैन, युवाले संचार र आक्रामकता व्यवस्थापनमा भारी सुधार देखाए पछि चीजहरू राम्रो हुँदै गए। २ matches खेल मध्ये, उसले २ team जित्नको लागि आफ्नो टीमलाई निर्देशित गर्‍यो, बोर्दोको युवाको साथ एक उपाधि सहित।
जुल्स कुन्डे बायो - सफलता कहानी:
अपेक्षित रूपमा, उनले जीवनको शुरुआत वरिष्ठ फुटबलरको रूपमा गरे। सबै कुरा कौंडेको लागि यत्ति सजिलै भयो, अद्भुत कोचलाई धन्यवाद जुन उहाँ जस्ता युवा तारा पछाडि थिए र मनपराउनेहरू Yacine Adli। कुनै समय मा, स्थानीय मूलले आफूलाई लिग १ मा सर्वश्रेष्ठ बचावकर्मी मध्ये एकको रूपमा स्थापित गर्‍यो। यस उपलब्धिमा धेरै शीर्ष क्लबहरू शार्कले जस्तै उनको वरिपरि घुमेका थिए।
सेभिला एफसी, एक प्रतिस्पर्धी टीम, उदाउँदो स्टारका लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प बने जो बिस्तारै उनीहरूको रक्षाको लागि एक स्तम्भ बन्यो। सर्जियो रेगुइलेनको साथमा, कान्डेले रेड-गोरालाई २०१//२०१० यूईएफए यूरोपा लिगमा सहयोग पुर्‍यायो।
यो Kounde ट्रफी मनाइरहेको छ। अर्को चित्रमा, उनले आफ्नो परिवारलाई भेट्न अस्वीकार गरे र कपको साथ सुत्न कोशिस गरे।
प्रतिस्पर्धा पछि, फ्रान्सेली आफ्नो प्रत्याशा र विश्लेषणात्मक क्षमता को आश्चर्यजनक भावना संग, Sevilla को रक्षा को प्रमुख बने। २०२१ मा, जब उनले एफसी बार्सिलोना (कोपा डेल रे सेमीफाइनल) को विरुद्ध एक उत्कृष्ट गोल (तल भिडियो) बनाए, फुटबल फुटबल विश्व स्तम्भित भयो।
तुरुन्तै उसको खेल पछि, जुल्स एक भयो म्यानचेस्टर युनाइटेड को रक्षा को प्राथमिकता को लागि प्रतिस्पर्धा चाहान्छन् विक्टर लिन्डेलो। निस्सन्देह, हामी फुटबल प्रशंसकहरू पावर हेडरमा सर्वश्रेष्ठ विश्वमा प्रवेश गर्ने कवचमा पुग्छौं। बाँकी, जसरी हामी जुल्स कोन्डेको बायो भन्छौं, इतिहास हो।
ऊ डेटि? को हो?
केवल उनको प्यारो बच्चाको अनुहार हेराईमा हेर्दै, कुनै पनि तथ्यलाई इन्कार गरिरहेको छैन कि जुल्स कोन्डे सम्भावित प्रेमिका र पत्नी सामग्रीको आँखामा एक स्याउ नहुने थियो। उसको ख्याती भएकोले, त्यहाँ डिफेन्डर कसले डेटि is गर्दैछ पत्ता लगाउने तीव्र इच्छा छ।
हाम्रो टोलीले खोजी गरेको छ र २०२१ को सुरूमा, त्यहाँ अझै पनि कौन्डेको WAG को कुनै चिह्न छैन। ऊ अविवाहित छ?… हुनसक्छ। के उसको केटीको प्रेमिका छ?… शायद (हो) निजी मामला - अहिले कम्तिमा। अन्त्यमा, त्यहाँ लांडिरस मूलका कुनै चिह्नहरू छैनन् कुनै विवाह बाहिरको बच्चा।
जुल्स Kounde व्यक्तिगत जीवन:
जुल्स Kounde फुटबल देखि टाढा निजी जीवन।
सबै फुटबल देखि टाढा, Landiras मा साथीहरू र आफन्तहरूले उसलाई एक आरक्षित केटाको रूपमा बुझ्दछन्, धेरै शान्त र आकर्षक। शौकको सम्बन्धमा, Kounde टेनिस को एक प्रेमी हो। उनले लामो समय र्याकेट खेलको आनन्द उठाए यो स्वीकार गर्नु अघि यो फुटबलको साथ जारी राख्न असम्भव छ।
यहाँ उल्लेख गर्नु उचित छ कि उसको परिवारका सदस्यहरू मध्ये कोही पनि (उनकी आमाले पनि) शुरूमा फुटबलमा प्रवेश गरेका थिएनन्। खेलको प्रेम बाल्यावस्थाको समयमा उत्तेजित भयो उसले फ्रान्सेलीको TF1 मा च्याम्पियन्स लिग खेलहरू देखे।
जुल्स कुन्डे जीवनशैली:
तलको फोटोमा, फुटबलरले चुटकिलाएर फ्यानहरूलाई चेतावनी दिए कि उनी सिट्रोजन ह्याचब्याक चलाउनका लागि नक्कल नगर्नुहोस्। कौंडे जीवनशैली न्गोलो कान्तेसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसले कम बजेटको कारको बारेमा सबै कुरा मन पराउँदछ। लेस ब्लेस फुटबलरले यस कार्यमा एन्टि-फ्ल्यास मनोवृत्ति चित्रण गर्दछ।
जूलस कौंडेको कार उसको जीवनशैलीको परिभाषा हो।
सेविलासँग प्रतिवर्ष २ million लाख यूरो बनाउने भए पनि जुल्स कौंडे महँगो जीवनयापनको लागि पूर्ण औषधि नै रहन्छ। त्यहाँ प्रशंसकलाई एक विदेशी घर (हवेली) को प्रदर्शन, वा काल्पनिक कपडा लगाउने, नाइट क्लब, गर्लफ्रेंड र बज, आदि जस्ता चीजहरू छैनन्।
जुल्स कुन्डे पारिवारिक जीवन:
तपाईको परिवारको एक सदस्य भएको तपाईले झुकाव राख्न सक्नुहुन्छ - दुबै राम्रा र गाह्रो समयमा - प्रकृतिको मास्टरपिसबाट एक हो। यहाँ हामी तपाईंलाई तिनका आमा बुबा र परिवारका अन्य सदस्यहरू (आफन्तहरू) को बारेमा अझ बढी तथ्यहरू बताउने छौं।
जुल्स कोन्डेको बुबाको बारेमा:
अनुसन्धानबाट प्राप्त नतीजाहरूमा यो छ कि जुल्स कुन्डेको बाल्यावस्थाको क्षणमा, उनका बुवा आफ्नो जीवनमा अनुपस्थित थिए। खुसीको कुरा, हामीलाई थाहा भयो जुल्सले उनीसँग १ turned वर्षको उमेर भए पछि कुराकानी गर्यो। खेलकुदका अनुसार;
मेरो परिवारको कुनै सदस्यले मेरो ओरिजन सिन्सेप्टो जन्मिएको थिएन। यो १ 16 को उमेरमा मेरो बुबाले मलाई भेटनुभयो। उनले मलाई भने कि म बेनिनबाट मूल अफ्रिकामा छु।
दुर्भाग्यवश, यो मेरो पतिपत्नी ग्रान्डप्यारेन्टहरूको देशको लागि खेल्नको लागि पहिले नै हो।
जुल्स कौन्डेको व्यक्तित्व उहाँकी आमाभन्दा फरक छ। उनले एक पटक भने कि उनले आफ्नो बुबाबाट धेरैजसो चरित्रका गुणहरू पाउँदछन्। तपाईको बुबाको बारेमा थोरै कागजातहरू अवस्थित छन्, हामी निश्चय छौं कि उसको अन्धकार पूर्णता पनि पश्चिम अफ्रिकीबाट आयो।
जुल्स कोन्डेकी आमाको बारेमा:
फुटबलरका अनुसार उनलाई जन्म दिने महिला उनी जस्तो क्यारियर बनाउँछिन्। काउन्डेले ओन्जेमन्डियाललाई भने कि उनको आमा उनका वित्तीय सल्लाहकार हुन्। तपाईं पनि फुटबल देख्नुहुन्न, एक्लो आमा त्यस्तो प्रकारकी भइन् जसले आफ्ना छोरालाई उसको प्राय सबै खेलहरूमा अवलोकन गर्छिन्। सुपर आमाले दुबै आँधी वा बर्षा अवस्थामा गर्छ।
मेरी आमा मात्र एक वर्षको लागि एक फुटबॉल मा एक प्रो र एक आधा पछि मेरो प्रो क्यारियर शुरू गरे। यी दिनहरू, उनी अधिक खेलहरू हेर्छन् म भन्दा बढी। इभन मैचहरू जहाँ म खेल्दिन, मेरो आमा उनीहरूलाई खुसीले खुशी पार्दछ।
म सम्झन्छु जब मेरो पहिलो फुटबल ब्यागहरू भित्र आउँदछन्, मेरी आमाले मेरो खाता ब्यालेन्समा हेर्नुभयो र भने, 'तर कसरी? ... यो धेरै छ '(हाँसो)। उनी मलाई भन्छन् कि। धेरै पैसा खोज्दै मेरो लागि सामान्य भयो, तर उनको लागि, होईन! मेरो SALARY उनको अब शक्स, उनी आईटी को लागी सहज गरीरहेको छ।
जुल्स कोन्डेले उनकी आमाको बारेमा फ्रेन्च आउटलेट, ओन्जे-मोन्डियाललाई एक अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उहाँ उनलाई गर्व गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हुर्काउने एक्लो व्यक्ति भएकोमा। १ At बर्षमा, केटाले आफ्नो शिक्षा पूरा गर्यो र अब, उनी BAC को धारक हो। सत्य यो हो कि उसले यो आफ्नो आमा बिना हासिल गरेको छैन।
जुल्स कुन्डे नातेदार:
निस्सन्देह, उनका हजुरबा हजुरआमा, काका र काकी - बेनिन गणतन्त्रमा धेरै टाढा - उनीहरूले गर्वका साथ आफ्नो परिवारको विस्तारित सदस्यहरूको रूपमा पहिचान गरेको हुनुपर्दछ। उनीहरूका लागि पक्कै पनि यो गर्वको कुरा हो। हामी पक्का आशा गर्दछौं कि जुल्स बेनिन गणतन्त्र भ्रमण गर्दछन् र उनीहरूसँग पहिचान गर्दछ।
जुल्स कुन्डी अनटल्ड तथ्यहरू:
तथ्य # 1 - Sevilla वेतन ब्रेकडाउन:
जुल्स Koundé सेविला वेतन
प्रति वर्ष: € 2.500,000
प्रति महिना: € 208,333
प्रति हप्ता: € 48,000
प्रति दिन: € 6,858
प्रति घण्टा: € 286
प्रति मिनेट: € 4.8
प्रति सेकेन्ड: € 0.08
तपाईंले जूलस कौंडेलाई हेर्न सुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले सेभिलासँग कमाएको हो।
के तपाई सचेत हुनुहुन्छ?… उहाँ कहाँबाट आउनुभयो, फ्रान्सका औसत मानिस जसले um,, ०39,099eप्रतिवर्ष यूरो कमाउँछ उसले 63 XNUMX बर्षसम्म काम गर्नुपर्नेछ। यो सेभिलाको साथ जुल्स कुन्डेको वार्षिक तलब बनाउनको लागि कति समय लाग्छ भनेर छ।
तथ्य #2- जीवनको सबैभन्दा ठूलो इच्छा:
फ्रान्सेली अन्तर्वार्तामा जुल्सले भने कि यो मर्नु नराम्रो हो, तर सधैंभरि बाँच्नको लागि सपना हुनेछ। उनको विश्वास छ कि एक दिन, एक प्रतिभाशाली एक चमत्कार सीरम आविष्कार गर्न जाँदैछ जसले सबैलाई जीवित रहन मद्दत गर्दछ। हम्म ... के तपाईंलाई लाग्छ कि यो सम्भव छ? कृपया यसमा टिप्पणी अनुभागमा तपाईंको विचार साझा गर्नुहोस्।
तथ्य #3- फिफा क्यारियर मोडमा खरीद गर्नको लागि एक उत्तम सीबीहरू:
२१ वर्षको जवान उमेरमा, जुल्स कौंडेको प्रोफाइल मात्र अद्भुत छ। कुनै श doubt्का बिना, उनी फिफा क्यारियर मोडमा उसलाई हस्ताक्षर गर्न उत्कृष्ट विकल्प हुनेछ। सँगी भाइहरू, एडुआर्डो कामाविन्गा र लीसेस्टरको Wesley Fofana समान श्रेणी मा गिर।
तथ्य #4- जुल्स कोन्डेको धर्म भनेको के हो?
हामीले उसलाई क्रूस साइन गरेको देखेका छैनौं जब ऊ मैदानमा प्रवेश गर्दछ। साथै, उसले अ fingers्गहरू औंलातिर इशारा गर्दै जब ऊ स्कोर हुन्छ। जे होस्, हामी जान्दछौं कि उसको बीचको नाम 'ओलिभर' को अर्थ 'जैतुन रूख' हो।
इसाई दृष्टिकोणबाट, उनको नाम फलफूल, सुन्दरता र मर्यादा को प्रतीक हो। यसै आधारमा हामीले जुल्स कोन्डेको धर्मलाई ईसाईमत भन्नका लागि पासा फ्याँक्यौं।
सानो छँदा, जुल्सहरू प्रायफेक्शनिस्ट थिए, जसले आफ्नो टोलीले खेलहरू गुमाए पनि क्रुर प्रतिक्रिया देखाए। यस सम्बन्धमा, फुटबल जीत वा आफ्नो आमा संग लडाई को कुरा थियो। जसै उनी ठूला भए, उनले महसुस गरे कि जित्ने, हराउने र टोली वर्क गर्ने सबै खेलका भाग हुन्।
जुल्स कौंडेको जीवनी हामीलाई एउटा कुरा सिकाउँछ। त्यो एक सफल फुटबलर हुनुको रहस्य एक कुकुर मानसिकता छ। जुल्सले त्यो बाल्यकालको अनुभवबाट सिके। साथै आफ्नो मूर्तिहरु बाट; सर्जियो रामोस र ठुलो भाई, Raphael Varane। अझ, एक्लो आमा वा बुबासँगै बस्नु, बुबाको अनुपस्थितिमा उहाँलाई आकार दिइयो।
ला République को सबै भन्दा आशाजनक फुटबल रत्न को जीवन कहानी मा हामी संग रहनुभएकोमा धन्यवाद। Lifebogger मा, हामी सँधै शुद्धता र निष्पक्षताको लागि तपाईंको मनपर्ने डेलिभर गर्ने प्रयास गर्दछौं फ्रेन्च फुटबल खेलहरु.
कृपया हाम्रो सम्पर्क पृष्ठ मार्फत हामीलाई सचेत गराउनुहोस् यदि तपाईंले जुजस काउन्डेमा हाम्रो बायोमा राम्रो देखिने कुनै कुरा फेला पार्नुभयो भने। अन्यथा, हाम्रो टिप्पणी सेक्सनमा फुटबलरको तपाईंको धारणाको बारेमा हामीलाई भन्नुहोस्। काउन्डेको संस्मरणको छोटो सारांशको लागि, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: जुल्स ओलिभियर कउन्डé।
व्यवसाय: फ्रान्सेली पेशेवर फुटबलर।
जन्म मिति: नोभेम्बर १ 12 1998 XNUMXth को सातौं दिन।
जन्म स्थान: पेरिस
पारिवारिक मूल: बेनिन रिपब्लिक, पश्चिम अफ्रिका।
उचाई (मीटर र खुट्टामा): १.1.78 मिटर वा feet फिट २ इन्च।
रुचि वा मनपर्दो: बास्केटबल, टेनिस र संगीत सुन्न (र्‍याप, ज्याज, R & B) आदि।
रोल मोडेल (फुटबल आइडल) सर्जियो रामोस र राफेल Varae।
नापसंद: अफ्रिकामा स्कूल, जातिवाद, दासत्व र अपराधहरूमा उत्पीडन।
कसले उहाँलाई सबैभन्दा प्रेरणा दियो: नेल्सन मण्डेला।
शिक्षा: फ्रेटरनेल डे लैन्डिरस।
युनियन इरिरी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य